UK မှာအသက်အရွယ်အတည်ပြု | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ဥပဒေ UK မှာအသက်အရွယ်အတည်ပြု
ညစ်ညမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရချမှတ်ထားလောင်းကစားဝိုင်းဘို့ရှိပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောအတွက်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌သားသမီးတို့အဘို့၎င်း၏ access ကိုမှလိုင်စင်ကန့်သတ်ခဲ့တာအရက်, စီးကရက်သို့မဟုတ်ဓါးဝယ်ယူရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအထောက်အထားအခြေပြုကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့သော်ကလေးများလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုတိုငျအောငျအစိုးရအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှကလေးများအပေါ်ကန့်သတ်ပြဋ္ဌာန်းတစ်လမ်းခဲ့သေးပါဘူး။ သို့သော်ဤအသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စနစ်၏နိဒါန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းပါ။
ဗြိတိန်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ကြီး, Matt Hancock ဟာအဆိုပါများအတွက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်မိန့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ 17 ဇူလိုင်လ 2017 တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေ 2017 အရာဧပြီလတော်ဝင်အစွမ်းအောင်မြင်။ သင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအတွက်လုပ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
ရလဒ်အဖြစ်အလုပ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ခေတ်သစ်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မိတ်ဆက်အပေါ်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဧပြီလ 2019, ဗြိတိန်ကလေးတွေအွန်လိုင်းဖြစ်ရန်အတွက်ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးနေရာအရပ်စေရန်အစိုးရ၏အလုပ်အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုအားဖြင့်အရပ်ဌာန၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 2016 အတွက်အများပြည်သူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လှူဒါန်းခဲ့နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဥပဒေပြုမထိုက်မတန်အောင်လွှတ်တော်အမတ်များစည်းရုံးလှုပ်ရှားခဲ့သည်။
ယင်းအက်ဥပဒေအောက်မှာရုပ်ရှင်ခွဲခြား (BBFC) ၏ဗြိတိန်ဘုတ်အဖွဲ့ Regulator ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်နှင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအရပျထဲမှာခက်ခဲတဲ့အသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြုအစီအမံကိုမထားကြဘူးပေးသောညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားစေအင်အားကြီးပေးလိမ့်မည်။
အစိုးရကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပတ်သက်. ညစ်ညမ်းပေးသွင်းဖို့ပြောနေတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ် 50 က်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုသူ 70% နေရာယူထားသည်။ စျေးကွက်ဝေစုများကအကြီးဆုံးအခမဲ့ site ကိုအပါအဝင်အတော်များများအသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အစိုးရနှင့်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
အခမဲ့ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ paid ဆိုက်များအတွက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ လိုအပ်ပါကအဆိုပါပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေး (ဥပမာ Visa, Mastercard) Non-compliant က်ဘ်ဆိုက်များကနေငွေပေးငွေယူန်ဆောင်မှုများဆုတ်ခွာဖို့, သဘောတူညီခဲ့ပါပြီ။
Website များကသူတို့ကိုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သူတို့ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဆာဗာများ, သူတို့ကိုထောကျပံ့ဖို့ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများလိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရငြင်းဆိုခံရဖို့ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအတင်းအကျပ်မရနိုငျလည်ပတ်ပေမယ့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့ရန်ရှာကြလိမ့်မည်သည့်အတွက်နိုင်ငံတကာနှင့်စည်းကမ်းတထုံးစံနှင့်အတူ။
ခေတ်အတည်ပြုလိုက်နာမည်မဟုတ်သောသူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များငါတို့သည်ထိန်းညှိ ISP ကပိတ်ဆို့ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်က်ဘ်ဆိုက်များကိုဆင်းယူခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။